"वन" - कोलर, जो जर्मन कम्पनी बेयर द्वारा फेडस र टिक्स को कुकुरहरुलाई पालतू जानवर को संरक्षण को रूप मा विकसित गरिएको थियो। "क्लेभर" कलरले 8 महिनाको लागि घडीको वरिपरि काम गर्दछ। यो अनूठा सुरक्षा उपकरण केवल एक जनावरको लागि प्रयोगको लागि डिजाइन गरिएको छ।
अब, यो प्रभावकारी कलर संग, तपाईंलाई हरेक महिना आफ्नो पालतू जनावरलाई स्प्रे, शैंम्पो र सङ्कलनमा बत्तीको रूपमा विशेष सुरक्षात्मक तयारीको साथ उपचार गर्न आवश्यक छैन।
कलर "वनो" को विशेषताहरु
यो सुरक्षा सहायक तपाईँको अवांछित परजीवीहरूबाट लगभग एक वर्षको लागि सुरक्षित गर्न सक्षम छ।
यसबाहेक, एक अद्वितीय उत्पाद म्याट्रिक्स नियमित रूपमा मात्र जब आवश्यक हुन्छ र सक्रिय घटकको सही अनुपात संग कलमबाट सक्रिय पदार्थलाई अलग गर्ने प्रक्रियाको निरीक्षण गरिन्छ।
कलर "वनो" लाई एक थप फाइदा छ: यो पानी प्रतिरोधी हो। यसको मतलब यो हो कि तपाइँको कुकुरले जलाशयमा सवारमा कलममा पस्न सक्दछ, जुन पानीमा परजीवीहरूको 100% सुरक्षा प्रदान गर्नेछ! जब कलर पानीमा डसेको छ, औषधिको तैयारी बन्द रहन्छ र यसलाई धोका गर्दैन।
तपाईंको पाल्तु मा एक कलर राख्नु, तपाईं चिन्ता छैन कि तपाईंको कुत्ता वा बिला बेघर जानवरसँग सम्पर्क गर्नेछ र यस क्षेत्रको वरिपरि हिडेर हानिकारक परजीवीहरू (fleas, ticks र सेन्सरहरू) लाइभ। विशेष सुरक्षात्मक पदार्थहरूलाई कलरमा राखिएकोमा धन्यवाद, तिनीहरू काटिन अघि मर्नेछन्।
कुत्तों र बिल्लियों को लागि कुत्ता कॉलर "वनो" सबै परजीवीहरु मा एक प्रभावकारी प्रभाव छ। इनिडैक्लोइड्रिड र फ्लोमेथ्रिनको सक्रिय घटक ऊनका खुट्टाहरू र आक्रोशन्सहरू घुसाउँछन्, त्यसकारण, यसले तपाईंको पादरीको कोटमा फ्याँक्न सक्दैन। यसैले, हानिकारक परजीवी जनावरबाट पाउँछ, यसले यसलाई काटेर पहिले।
कलरमा रहेका सबै चीजहरू बिल्कुल हानिकारक छन्, त्यसैले उनीहरूले तपाईंको पाल्तुन स्वास्थ्यलाई सबै असर गर्दैनन्। यसको अतिरिक्त, तिनीहरू गन्ध नगर्ने र सानो आनुपातिक खुराकमा यसलाई बाट खडा गर्छन्।
एक प्रभावी सुरक्षात्मक एजेंट शिकार कुत्तों को सुरक्षा को लागि आदर्श छ, यो कुत्ते को सम्भावनात्मक भावना को प्रभावित गर्दैन र उसलाई शिकार देखि रोक नहीं पडता।
साथै, कोलर "वनानो" लाई एलर्जीहरूको प्रवद्र्धन गर्ने जनावरहरूको लागि उपयुक्त छ।
"Foresto" को विशेषताहरु र संरचना
उपस्थितिमा, "वनको" एक भूरी बहुलक बन्डल हो जसको लागि तयारीको लागी दुई वा तीन लूप्सहरू छन्। एलईडी क्लिपहरु जो कलर संग संलग्न हुन्छन्, सुन्दर रूप देखि रात मा डाल दिए र पालतू जानवर को स्वामी सहायक को रूप मा सेवा गर्दछ। साथै पतली कलरमा कम्पनी बेयरको लोगो हो। प्रभावकारी औषधि "वनो" जनावरको गर्दनमा आदर्श रूपमा बस्छ , कम वजन हुन्छ र गर्दनलाई बलियो बनाउँदैन।
कुत्तों र बिल्लियों को लागि कोलर "वनो" को नवीनतम प्रौद्योगिकी को अनुसार विकसित गरिएको छ, यस अद्वितीय रचना मा2बुनियादी सुरक्षा र7अतिरिक्त पदार्थहरु छन्:
Epoxy सोयाबीन तेल;
कालो आयरन अक्साइड वर्णक;
वनको कलरको प्रयोग
"वनको" एक कलर हो, जुन एक्कापारसाइट्स (माइट्स, फ्याटस र सेन्डर्स) संग संक्रमित हुन्छ जब घरेलु जनावरहरूको रोकथाम र उपचारका लागी प्रयोग गरिन्छ। एक कुत्ता वा क्याला कलर पहनेर, तपाइँ पनि वातावरणमा रहेका पिडा लार्वाबाट जनावरलाई पनि रक्षा गर्न सक्नुहुन्छ।
जनावरहरूको अधिकांश मालिकहरूले एक प्रभावकारी उत्पादन "वनो" खरीद गर्छन् - टेक्सबाट एक कलर। सुरक्षात्मक एजेन्टमा उत्कृष्ट गुणहरू छन् र पातबाट परजीवीहरूलाई घृणा गर्छ, जसले पशुहरूलाई भेक्टर-जन्मे रोगहरूमा पारेको जोखिमलाई कम गर्दछ। चिकित्सक को कलर को प्रयोग को लागी अगाडी बढाएको क्रियाकलाप को अवधि मा हुनु पर्छ।
यो एलर्जी बेडा डर्मेटाइटिस को उपचार मा पनि प्रयोग गरिन्छ।
"Foresto" को लागि निर्देशन
आवेदनको बेलामा fleas र ticks विरुद्ध प्रत्येक विरोधीले निर्देशनहरूको सख्त पालन गर्न आवश्यक छ। तपाईं वनको ठीक ढंगले ठीक गर्न 1 मिनेट चाहिन्छ, र 240 दिन भित्र तपाईंको पातहरू सबै इक्टोपराईटबाट सुरक्षित हुनेछ!
कसरी राम्रो तरिकाले "Foresto" (कलर) मा राख्नु पर्दछ?
बाकस खोल्नुहोस् र कलर हटाउनुहोस्, त्यसपछि लिनुहोस् र यसको भित्रबाट प्लास्टिक विभाजन हटाउनुहोस्।
अब पशुको गर्दनको वरिपरि एक कलर राख्नुहोस्, यसलाई समायोजन गर्न, ताकि तपाइँसँग कलर र कुत्ता (बिरालो) को गर्दन बीच 1-2 सेन्टिमिटर खाली ठाउँ हो।
अर्को, पालो को माध्यम ले कलर को ढीला अन्त को नजिकै, र कैंची संग अतिरिक्त कटौती।
3 एलईडी क्लिपहरू लिनुहोस् (तिनीहरू "वनो" सेटमा समावेश छन्) र कलरमा संलग्न हुन्छन्। ताकि तिनीहरू यसको हटाउनका साथ हस्तक्षेप गर्दैनन्, यो उत्पादनको गैर-ओभरलैपिंग भागमा जगेडा गर्नु आवश्यक छ।
क्लिप संलग्न भएपछि, क्लिक गर्नुहोस्। एलईडी सामानले तपाईंको पेटलाई अँध्यारोमा हेर्न मद्दत गर्नेछ।
"Foresto" को कन्ट्रा-संकेत र साइड इफेक्ट
"वन" - बिल्लियों र कुत्तों को लागि एक कलर, जो कुनै contraindications छैन। तर त्यहाँ एक अपवाद छ जब औषधि औषधिको केहि भागहरु लाई बढि संवेदनशीलता छ। अन्य अवस्थामा, पालतू जनावरहरूमा "वनको" को आवेदन गर्दा, कुनै जटिलता र साइड इफेक्टहरू देखिएन।
"वनको" प्रयोग गर्न सकिँदैन:
3 महिना भन्दा सानो बच्चाहरु र पिल्लाहरू जुन2महिना भन्दा कम छन्;
यदि तपाइँ पालतू समूहहरू अन्य समूहहरूको कोटको-एसिराकिस लागू गर्नुहुन्छ भने;
संक्रामक रोगहरूबाट पीडित जनावरहरू;
यदि एक महिनाको आवेदन पछि, पाल्तुले छालामा लाडो छ।
गर्भवती र नर्सिङ जनावरहरू पशुपक्षीसँग परामर्श पछि मात्र "वनको" पहन सक्छ!
धेरै नराम्रो, बिल्लियों या कुत्तों मा कलर को आवेदन पछि केहि दिन भित्र, दुष्प्रभाव प्रकट हुन सक्छ: छाला र खुजली को लाली। नियमको रूपमा, यस लक्षणमा2हप्तामा पास हुन्छ।
कलर "Foresto" को बारे मा समीक्षा
बिरालो र कुकुरका लागि एक प्रभावकारी सुरक्षात्मक सहायक उपकरण "Foresto" 2014 बाट बेयरले उत्पादन गरेको छ। "Foresto" एक कलर हो जुन पालतू जान्छ दुवै को लागि अपरिहार्य चीज भएको छ - परजीवीहरूको संरक्षणको रूपमा, र तिनीहरूको मालिकोंका लागि - तिनीहरूलाई उनीहरूको मनपर्ने पालतू जनावरहरूको हेरविचार गर्न मद्दत गर्न।
यस अद्वितीय कलर सिर्जना भएको हुनाले3वर्ष भएको छ। यस समयमा, यो उत्पादनको ठूलो मात्रा बेचेको थियो। पालतू जनावरहरूको मालिकको अनुसार, "वनो" खरिद गरी सफलतापूर्वक प्रयोग गरी, कलरले प्रभावकारी कार्य गर्दछ!
अधिकांश मानिसहरु एकदम खरिद गरिरहेका थिए, र 8 महिनामा फेरि उनीहरूका पाहुनाहरूको लागि नयाँ कलरहरू खरिद गर्थे। धेरै सकारात्मक समीक्षा र साक्षात्कारका अनुसार, यो स्पष्ट भयो कि 95% माथीमा कोलर "वनो "ले एक्कापारसाइटबाट पाल्तुहरू बचाउन मद्दत गरे।
अब तपाईं प्रकृतिमा कुकुरसँग घण्टा हिड्ने खर्च गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई क्याम्प साइटमा लैजानुहोस् वा यात्रा गर्दै। कुकुरहरू र बिरालोहरू चाँडै नयाँ सुरक्षात्मक उपकरणमा प्रयोग हुन्छन् र अँध्यारोमा हराएनन्। बस आफ्नो पालतू एक चमत्कार कलर को राख्न को लागि मत भूलना!
म "Foresto" किन कहाँ खरीद गर्न सक्छु?
बिरालो र कुत्तहरुको लागि एक प्रभावी सुरक्षात्मक उपकरण "वनून" को सीधा बेयर देखि खरीदा जाना चाहिए। निर्माता लगभग2पटक सस्ता कलर "वन"। मूल्य 1600 देखि 2000 rubles सम्म भिन्न हुन्छ।
लोकप्रियताको कारण, "वनो" बिक्रीले धेरै पटक बढ्यो र यसका कारण, कम गुणस्तरका वस्तुहरू बजारमा देखा परे, नकली उत्पादनहरू हो। आदेशमा नकलीको लागि पतन नगर्ने, यो पशु पशु फार्मेसीहरुमा एक कलर "वनो" को खरीद वा बेयरको आधिकारिक वेबसाइटमा विश्वभरका उत्पादनहरू बेच्न उत्तम छ।
कलर "वन": मूल्य
"वनको" किटमा एक कलर र हल्का-प्रतिबिम्बित क्लिपहरू समावेश छन् जुन संलग्न भएका छन् ताकि तपाईं अँध्यारोमा तपाईंको पातहरू हेर्न सक्नुहुनेछ।
दबाइको भण्डारण परिश्रमलाई दृढतापूर्वक पालन गर्नुहोस्: कलरलाई सूखी स्थानमा बन्द बक्समा राखिएको हुनुपर्छ, जहाँ प्रत्यक्ष सूर्यलाइट0डिग्री सेल्सियस देखि 30 डिग्री सेल्सियस सम्म तापमान मा प्रवेश गर्दैन। कलरलाई खाना र पशु फिडको साथ राख्न राख्न कडा रूपमा निषेध गरिएको छ।
बिक्रीमा फरक लम्बाईको कलरहरू छन्, यो सबै तपाइँको पालतू जनावरको आकारमा निर्भर गर्दछ:
लामो 70 सेमी कुकुर कलर "वनो"। मूल्य 2100-2250 rubles हो;
कुकुर र बिरालोका लागि 38 वटा सेन्टिमिटर कलर "वनो"। मूल्य 1750-1900 रूबल छ।
ड्रगको शेल्फ जीवन - निर्माण मिति, मिति,3प्याकेजिङको मितिबाट। 8 महिनाको अवधिको प्रयोग पछि, कलरले यसको सुरक्षात्मक-प्रायोगिक गुण हराउँदछ।
एक कलर "वनून" पहनने को लागि एक पालतू जनावर कसरी अनुकूलन?
यदि तपाईंले एक जना जनावरमा एक कलर राख्नु भयो भने, तपाइँ यसलाई एक हप्ताको लागि हेर्नु पर्छ। यदि तपाईंको पाटाले नयाँ सहायकमा नकारात्मक प्रतिक्रिया गर्दछ भने, स्वादिष्ट उपचार वा मनोरञ्जनको लागि मनोरञ्जनको प्रयोग गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। यस तरिकामा, तपाइँले नयाँ पालारबाट तपाईका पाल्पालाई विचलित पार्नुहुनेछ।
दुर्लभ अवस्थामा, तपाईंले पालतूको लागि नयाँ सुरक्षा उपाय राख्नुभन्दा पछि, तपाइँ जान सक्नुहुन्छ कि जनावरको खुट्टाहरू। डराउनु नगर्नुहोस्, किनकि यो तथ्य यो हो कि तपाईंको पाल्तुले एक कलर पहिला प्रयोग गर्न प्रयोग गर्दैन। एकपटक फेरि, कलरलाई सही ढंगले फिटिंग गर्दै डबल-जाँच गर्नुहोस्, दुई औंलाहरू कलर र गर्दनको बीचमा राखिनुपर्छ।
कुत्तों र बिल्लियों को लागि "Foresto" कुत्ता कलर तपाईंको पालतू जानवर को लागि अपरिहार्य सहायक हुनेछ! Fleas र ticks को लागि एक नयाँ उपाय संग, तपाईं पैसा बचत गर्न सक्नुहुन्छ। कुकुरको लागि कुकुर कलर "वनो" - 1 महीनाको मूल्य केवल पारम्परिक औषधीको तुलनामा 19200 रल्स मात्र छ।
एक सुरक्षा सहायकले पालतू जनावर मालिकहरूको धेरै सकारात्मक समीक्षा पाएका छन्। अब उनीहरूको मनपर्ने पातहरू हानिकारक परजीवीहरूको विरोधमा 24-घण्टा भन्दा कम सुरक्षा छन्!
ग्रुनेन्डल (कुत्तों को नस्ल): फोटो र वर्णन
लुगा मा minimalism: शैली, फैशन को विवरण
उपचार र गर्भावस्था को समयमा cystitis को रोकथाम
Hagia सोफिया, इस्तानबुल: एक संक्षिप्त विवरण, फोटो, इतिहास, ठेगाना, शीर्षकमाथिको घण्टा
बाल सदन मा sectarian काम विकास
व्यावसायिक दाँत Whitening: विधिहरू, contraindications